FAQ - Allevents.ng
Site n'iji weebusaiti a, i na-anabata na anyi na-eji kuki. Gukwuo Aghotara m
12 omume niile na Nigeria
Tinye ihe omume/IIu olu
Nweta tiketi m
Tinye ihe omume/IIu olu Nweta tiketi m
Ulo ihe nkiri
Nri na ihe ọṅụṅụ
Onye nhazi nmeme
Idozi ebe nmeme
Ndi na pata
Njikọ mbụ nke Nigeria
Gini kpatara m ga-ewere “Allevents.ng Maka mmemme m?
Anyi na-egbochiri gi ọnụ ego na oge iga ebe di iche iche ire na izụ akwụkwọ ikikere, I ga eme ya n’ụlọ gi mgbe obụla . O bu ụzọ di mfe eji ekesa mmemme, ree akwụkwọ ikikere gi maọbụ gote akwụkwọ ikikere. “Aiievents.ng” bu ebe na ejikota “online” na mmemme puru iche n’ala Naijiria.
Kedu kam ga-esi ebido?
Nke mbu jee na www.allevents.ng pia aka site na enwemenwe mekorita mmadụ na ibe ya maọbụ i-meel. A ga-ezita ihe ngọsipụta na i-meel, pia aka na ihe njikọta ka ichọpụta ozi bara uru maka gi.
Kedu kam ga-esi azụta akwụkwọ ikikere?
Bido site na ichọ mmemme di gi mma site na ndi anyi depụta ra na websait. I ga enwe ike ibido site n’asụsụ di iche iche ga eduga gin a ihu akwụkwọ maọbụ obodo ụlọ ngwa ọrụ, pia aka na mmemme, ọ ga-eduga gi ebe a na-enweta akwụkwọ ikikere, ebe e gosiri ọnụ ego mmemme. A ga-eweta ụzọ di iche iche esi akwụ ụgwọ na iwetacha ozi di mkpa.
Kedu kam ga-esi ere akwụkwọ ikikere?
Tinye ihe enwemenwe gi nke ụlọ-akụ ma ọ bụrụ na inweghi ihe enwemenwe nke ụlọ akụ, mee otu site na i-meel. Gosi ihe njikọta ezitara na i-meel gi, were “sell ticket” site na ugbooji bulie mmemme. Depụta ozi mmemme ma gosi ọnụ ego akwụkwọ ikikere. Mmemme gi ga-apụta ma emegharia ya na ngalaba ụlọ ọrụ na ahazi ihe anyi nke agahi ewe nkeji iri atọ na oge ọrụ maọbụ karia ma eziga ya.
Maka osina di, achọ ichọpụta ihe gbasara mmemme gi, anyi ga-achọ gi tupu mmemme a apụta. I nwere ike ichọ anyi na selltickets@allevents.ng
Kedu kam ga-esi ebuli mmemme m?
Tinye ihe enwemenwe nke ụlọakụ ma o bụrụ na inweghi i-meel, ihe enwemenwe na nke anyi mepe otu site na i-meel. Chọpụta ihe ezitere na akpati i-mee, were “manage Events” site na ugbooji ndi ewepụtara tinye mmemme gi. Depụta ozi mmemme. Were ihe nkwalite gosi ugboro ole ichọrọ ka ebulie mmemme gi elu tupu eme mmemme a. Ichọrọ ibuli mmemme ebunigoro, jee na ugbooji pia aka na “Promote Event” chọta anyi na promotemyevents@allevents.ng
Kedu kam ga-esi enweta akwụkwọ ikikere?
A ga eweta ozi gbasara akwụkwọ ikikere gi site na nke i were (i-meel gi maọbụ ekwenti) mgbe i na-enyocha ụgwọ akwuru tupu ezipu akwụkwọ ikike maka akwụkwọ ikikere i họrọ mgbe I na-azụ akwụkwọ ikikere.
E nwerew m “e-ticket” nke m bipụtara, A ga-ewe ya aba na mmemme?
Eee, ma “elektronik tiketi na standad ticketi” di mkpa na ibanye. Jisie ike dobe ya ebe nchekwa na ebe a ga-enweta ihe niile din a akwụkwọ ikikere.
E zipuru m mmemme mana ahụghi m ya. Ọ gini?
I ga eso mmemme gi site na itinye ya ihe enwemenwe gi nke ụlọakụ ma pia aka na “Manange Events” mmemme pekariri ibulitere ga-adi n’okpuru mmemme gi. I ga-achọpụta ebe mmemme gi nọ site na ipi aka na “Lee mmemme m” nke a ga-ebuje gi na ihu akwụkwọ ebe i ga-ama ma mmemme gi di maọbụ na ewebeghi ya.
I gosi ihe di iche iche I mara na “Allevents.ng” dika nchekwa. Mmemme ọ bụla ezipuru a ga-eme-guari yam aka ohi. A na-enyọcha site na ngalaba ụlọ ọrụ anyi n’ahụ maka nhazi ihe.
Ihe izipuru ga-ewe nkeji iri atọ n’oge ọrụ tupu o pụta ma ka osina di, o ga anote aka ma o bụrụ na ezipuru mmemme n’etiti (18:00 to 07:00).
O gara ihe dika awa iri abụọ na ano, ihubeghi mmemme gi, biko lee i-meel ihe enwemenwe gi nke ụlọakụ I wetara. Jisie ike zipu ọzọ maọbụ cho anyi na support@allevents.ng
Kedu kam ga-esi ama ma ebughariri maọbụ kagbuo mmemme m zipuru?
O bụrụ na ebuhariri maọbụ kacha mmemme I kwuru ụgwọ ya, a ga-eme ka I mara site na i-meel maọbụ ekwenti I wetere. A ga eweta ozi gbasara mmemme. O bụrụ na igbanwela i-meel maọbụ ekwenti gi, biko mee ka anyi mara n’oge na-adighi anya.
Gini ga eme ma akagbuo mmemme m?
O bụrụ na akagbuo mmemme ikwuru ụgwọ ya maọbụ bugharia ya, enyena nsogbu, a ga-enye gi ego gi site na ndi nkwado maọbụ ndi na-ahụ maka mbuli elu.
Anyi ga-egosi ozi ohu gbasara mmemme ma duzie gi ụzọ esi enyeghachi gi ego. Ma ka osina di o ga egbu oge maka nhazi ihe na ichọpụta akwụkwọ ikikere. O dikwa ezigbo mkpa inwe ihe ngosi akara akwụkwọ ikike. O bụrụ na igbanwela i-meel gi ma o bu ekwenyi gi, biko mee ka anyi mara n’oge na-adighi anya.
Kedu kam ga-esi achọpụta ihe m zuru ma m kwucha ụgwọ?
Anyi na akowa okwu bu “kompliti pochese” mgbe anyi nwetara ihe site ngosi na ihe enwemenwe nke ụlọakụ na akwụkwọ ikikere I chọrọ, ihe niile a zuru ga egosi akwụkwọ ikike di iche a ga-eziga na i-meel gi moobu ekwenti. O bụrụ na inwetaghi akwụkwọ ikikere mgbe I zuru ihe, mara n’ihe ichọrọ agaghi. Ikwu ụgwọ n’ụlọ akụ na-egbutu oge tupu o gaa. Anyi ga aja gi ike ka imegharia ya ọzọ rue mgbe ihe ichọrọ pụtara, iga enweta “e-tiket” na mmemme gi iji gosi ihe ichọrọ.
Ihe niile gbasara kadi m, o nwere nchekwa?
Eee, anyi na-ewe “Secure SocketLayer” (SSL) rukanuzu tugharia kadi iji kwuo ụgwọ iji gba mbo na echekwara ya.
O bụrụ na FAQs azaghi ajụjụ nkowa m niile, kedu kam ga esi ahụ gi?
O bụrụ na azaghi ajụjụ niile ijụru, biko chọta anyi site na i-meel na support@allevents.ng maọbụ kpo anyi n’oge ọrụ n’elekere asatọ ruo na elekere ano.
Ka esi ere akwụkwọ ikikere
Ka esi azụ akwụkwọ ikikere
Ka esi ebuli mmemme
Aro maka nchebe